घुससहित समातिए इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत:: Mero Desh
घुससहित समातिए इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत
Published on: २ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०४:५१
विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास पोखरेललाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले उपमहानगरका लेखा अधिकृत पोखरेललाई
६५ हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार विद्यालयको परीक्षा योजनाको खर्च हिसाब मिलान गर्न उनले सेवाग्राहीसँग ६५ हजार घुस मागेका थिए । उक्त रकम लिन बिहीबार साँझ उनी इटहरीको वीपी चोकमा रहेको समिप होटलमा पुगेका थिए । होटल अगाडी मोटरसाइकलको स्टार्ट बन्द नगरीभित्र पसेका पोखरेललाई घुस लिएर निस्कन खोज्दा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
अहिले नेपालीहरु घर फर्किरहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले टिकट दिए त ठिकै हो । नत्र त अहिले फर्कनेलाई साह्रै मर्का परेको छ । महिनौंदेखि बेरोजगार भएकाको साथमा न पैसा छ, टिकट काट्न सक्ने हैसियत । त्यसमाथि पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा महंगो भाडा लिइएको छ । आफैं पैसा तिरेर घर फर्कन्छु भन्दा पनि टिकट पाएका छैनौं । कसरी हुन्छ यो उद्धार ? म यूएईमा छु । यूएईको एक होटलमा काम गर्थें । तर कोरोनाको कारण यहाँका होटलहरु सबै बन्द भएका छन् ।
कोरोना महामारीकै बीचमा केही खुकुलो भए पनि होटल खुल्ने नखोल्ने अन्यौलमा छ मेरो कम्पनी । यो महामारीको समय भएकाले मलाई कम्पनीले लामो बिदा दिएको छ । तीन महिना भयो कोठामा बसेर खाएको । कहिले नेपाल फर्कन पाइएला थाहा छैन । तर पनि आश मार्न सकेको र्छन । घर फर्कन पाउने आशमा बसिरहेको छु । समस्या के भयो भने हामी आफैं टिकट काटेर आउने अवस्था छैन ।
कम्पनीले टिकट पाइएन मात्र भन्छ । यो चार्टर्ड उडानको समयमा टिकट नपाएको भन्दै कम्पनीले अब नियमित उडन खुलेपछि पठाउने भनेको छ । अहिले महंगो भाडा हुँदा कम्पनीलाई गाह्रो भएको छ । अरु देशका नागरिकलाई मेरो कम्पनीले पठाइसकेको छ । तर हामीलाई पठाएको छैन ।
अब बरु सरकारले नियमित उडान गरिदिए हामीलाई स्वदेश फर्कन सजिलो हुने थियो । यसरी त खै कहिले पालो आउला थाहा छैन । हामीलाई आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमिको माया छ । हामी सुरक्षित रुपमा आफ्नो देश फर्कन चाहन्छौं तर खै हामी परदेशीको पीडा कसले बुझ्ने ? सरकारले नै हामीलाई घर फर्कन नसक्ने परिस्थितिमा ल्याइपु¥याइदियो ।